Shirkad Iswiidhish ah oo qaan mag-dhow lagu soo sheegtay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhaawacyo ka soo gaaray shakhsi ay farihiisa soo gaareen sunta Arsenik. Sawirle: Prof. Sun, China Medical University, Shenyang
Shirkad Iswiidhish ah oo qaan mag-dhow lagu soo sheegtay
Shirkaddu waa wey ka war-haysay in dib loola xisaabtami doono
La cusbooneeyay måndag 16 september 2013 kl 12.59
La daabacay måndag 16 september 2013 kl 09.39
Bulshada ku dhaqan tuulada Polygono oo dhacda waqooyiga dalka Jili (Chili) ayaa dacwad mag-dhow gaarsiisan 90 malyuun oo koron ku soo oogtay shirkadda Boliden, sida uu qoray war-geeyska maalinlaha ee Dagens Nyheter (DN).
Qiyaastii dadyoow gaarsiisan 700 oo ruux ayey wax-yeelooyin ka soo gaareen sunta arsheniik oo shirkadda Boliden ey ku aastay tuulada Polygono ee dalka Jili (Chili) muddo iminka laga joogo qiyaastii 30 sannadood.
Shirkadda Boliden ayaa ku andacootay inay ogolaansho ka haysatay hayadaha ey khuseeyaan sidii dhoobada suntaa loogu dhoofin lahaa dalka Jili, hase yeeshee sida ku cad dacwadda laga soo oogay shirkadda in aaney jirin hayado middaa ogolaadey, balse ey hayad goboleedka iyo hayadda badbaadada cimiladu ey go’aan ku gaareen in dhoobadaa sunta ah lagu aaso dhulka ey gacanta ku haysay shirkadda Boliden.
Hayadaha dawliga ee dalka Jili iyo dadyoowgii ey dhibaatooyinku ka soo gaareen ayaa horey dhowr jeer uga dalbadey shirkadda Boliden iyo dawladda dalkan Iswiidhen sidii taageero dhaqaale loogu fidin lahaa dadyoowgii ku wax-yeeloobey iyo weliba sidii loo nadiifin lahaa dhulkaa suntu aafeeysay iyada oo aan illaa hadda wax jawaab ah laga siin middaa.
Caqabadan sunta loogu shubey tuulada Polygono oo dhacda bannaanka magaalada Arica ayaa markii ugu horeeysay la shaaciyey sannadihii 1990-meeyadii , iyadoona lagu shaaciyey filin loogu magac-darey ”Blybarnen” oo la iska tusay idaacadda la iska daawado ee SVT sannadkii 2009:
- Sannadkii 1984 ayay shirkadda Boliden saddex safar oo kala duwan ugu dirtay dhoobo sun ka kooban oo kor u gaareeysa 20 tan tuulada Polygono oo dhacda waqooyiga dalka Jili, isla-markaa iyada oo shirkadu wada-hadal la waddey hayadda dhowrista cimilada iyo sidii ey ka yeeli lahayd dhoobada sunta ah. Dhoofinta alaabtaasina oo aanay ka war-hayn hayaddu, sida uu sheegay Jonas Ebbesson oo ku takhasusay culuunta xeerka cimilada kana mid ah dadyoowga matalaya dhibbaneyaasha.
Shirkadda Boliden ayaa sannadkii 1985 howshaa ku siisay shirkad laga leeyahay dalka Jili (Chile) iyo sidii ey shirkaddaasi u meeleyn lahayd dhoobada suntaa, waa maxay haddaba masuuliyadda ka saaran shirkadda Boliden in dacwad hor leh lagu soo oogo?
-Shirkadda Boliden waa ay la socotay halista dhoobadani lahayd iyada oo ku dadaalaysay sidii ey faraha ugala bixi lahayd, iyada oo shirkaddu weliba ogsooneyd in falkaa lagu daba-geli doono:
-Intaa waxaa dheer in shirkad aan sidaa awood u lahayn gacanta loo geliyey iyada oo sannadihii siddeetameeyadii uu dalka Jili (Chile) ka jiray maamul keligi talis ah oo aan lahayn xeerar la aqoon-san yahay ee dhanka cimilada. Dhanka kale shirkadda Boliden waxay xilligaa ka mid ahayd shirkadaha ugu waaweyn ee aqoonta ballaaran u lahaa wax-yeelooyinkaa. Hase yeeshee go’aansatay in suntaa loo dhoofiyo carrigaa, sida uu sheegay.
Jonas Ebbesson, ayaa intaasi raaciyey in siyaabo kala duwan ay suntaasi u saameeysay bulshada carrigaa ku dhaqan. Hadday noqon lahayd hawada oo ku dhegta, cudurro wax-yeeleeya kelyaha iyo beerka, carruur dhicisowda, cudurro dhanka maqaarka ah iyo guud ahaan tayada noloshooda oo hoos u dhacda.
Shirkadda Boliden ayaa ka gaabsatay inay faallo ka bixiso dacwooyinkan lagu soo ogay.